Magaaladda Jowhar oo ay ka jirto Xiisad Siyaasadeed, kadib markii uu gaaray Cosoble, iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ku biiray dhinac ka mida dhinacyadii is hayay. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Aug 15, 2017
Madaxwaynaha Maamulka Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble oo shalay qayb ka mida Baarlamaanka Maamulkaasi ay sheegeen inay kalsoonidda kala laabteen iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa siyaabo kala gooni gooni ah u gaaray Saaka Magaaladda Jawhar, iyadoona Xiisad xoogan ay ka taagan tahay Magaaladdaasi.
Cosoble ayaa muujiyay Awoodiisa Siyaasadeed markii ay Saaka ku soo dhaweeyeen Garoonka illaa iyo 40 Xildhibaan, halka tiro kale oo Xildhibaano ahna ay isaga la saarnaayeen Diyaaradda. Waxaa sidoo kale soo dhaweeyay Wasiiro, Saraakiil iyo Dadwayne, iyadoona Ammaankiisana ay si gaar ah u illaalinayeen Ciidamo ka tirsan NISA.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, Sh Cismaan ayaa isna gaaray Saaka Magaaladda Jowhar, Waxayna Labada Masuul ka kala qaateen Muqdisho Diyaarado kala gooni ah, iyadoo taasi ay muujinayso inaysan isku siyaasad ahayn. Waxaana Sh Cusmaan isna garoonka ku soo dhaweeyay Xildhibaanadii Shalay sheegtay inay Kalsoonidda kala laabteen Cosoble. iyadoona markii uu Sh Cusmaan tagay Jowhar uu si toos ah u aaday Guriga Cali Guudlaawe-Madaxwayne Ku Xigeenka Hirshabelle oo Shalay ay Xildhibaano iskood ugu magacaabeen Ku Sime Madaxwayne.
Sh Cusmaan Shir Jaraaid oo uu ku qabtay Jowhar waxa uu ku sheegay in go’aankii ay gaareen Xildhibaanada ay tahay mid sharci ah oo dastuuri ah. Wuxuuna intaa ku daray in Xilka Madaxwaynanimo uu si hayn doono Muddo 30 Cisho Ku Xigeenka, Cali Guudlaawe, isagoona sheegay in Mudadaasi lagu soo magacaabayo Guddi Doorasho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay beesha uu ka dhashay Cali C/llaahi Cosoble inay isku soo sharaxdo xilka laga qaaday. Waxa uu sidoo kale ka dalbaday Dawladda Dhexe inay ayido Go’aanka Baarlamaanka. iyadoo la wada ogyahay in Dawladda Dhexe ay arrintan Daaha gadaashiisa ka maamulaysay.
Madaxwayne Ku Xigeenka, Cali Guudlaawe ayaa isna aqbalay in si KMG ah uu u sii hayo Xilka Madaxwaynanimadda Hirshabelle, taasoo muujinaysa inuu isna qayb ka yahay is haysadka iyo Xiisadda Hirshabelle.
Cali C/laahi Cosoble oo isna Shirar ku leh Jowhar ayaa lagu wadaa inuu qabto Shir Jaraaid oo uu ku qaadacayo Xil ka qaadistii Shalay ay sheegeen inay ku sameeyeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle.
Xildhibaanadda shalay ku shiray Jowhar ayaan la xaqiijin karin Tiradooda iyo siday u dhacday codayntoodu, maadaama aysan u oggolaan Saxaafaddu inay goob joog ka ahaado Kulankooda, Waxaana laga maqlay Warbaahinta oo kaliya iyagoo sheeganaya inay yihiin Tiradaas, isla markaana ay Kalsoonidda kala laabteen Madaxwaynihii Maamulkaasi, Cali C/laahi Cosoble.
Hadda: Muqtaar Rooboow oo hadda la hadlaya Saxaafadda, Muxuu ka hadlayaa,?